လကျစတာ ၂ -၂ ယူနိုကျတကျ ပှဲစဉျမှာ ပွောစရာဖွဈခဲ့တဲ့ အခကျြ ၆ခကျြ – Premier League Special
December 26, 2020 La Min Article 0
ယူနိုကျတကျနဲ့ လကျစတာတို့ဟာ ဘောကျဆငျဒေးပှဲစဉျမှာ ၂ဂိုးစီ သရသော ဖွဈခဲ့ပွီး ၁မှတျစီ ခှဲဝယေူသှားခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအတှကျ ဦးဆောငျဂိုးကို ရကျရျှဖို့ဒျက သှငျးယူပေးခဲ့ပွီး ဟာဗေးဘနျးဈက လကျစတာအတှကျ ပွနျလညျ ခပြေခဲ့ကာ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈက ဦးဆောငျဂိုး ထပျသှငျးခဲ့ပမေဲ့ ဗာဒီက ယူနိုကျတကျ နောကျခံလူတှေ ကွားကနေ ခပြေဂိုး ပွနျသှငျးကာ အဆငျ့၂နရောမှာ ဆကျလကျ ရပျတညျစခေဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ ပှဲစဉျမှာ ပွောစရာဖွဈခဲ့တဲ့ အခကျြ ၆ခကျြကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁.ဆိုးလျရှားရဲ့ လူစာရငျး အပွောငျးအလဲကို မွငျတှရေ့ခွငျး
ဆိုးလျရှားဟာ ယနမှေ့ာတော့ လူစာရငျးကို အပွောငျးအလဲ လုပျလာခဲ့ပွီး ပေါ့ဂျဘာနဲ့ ကာဗာနီကို ခနျြလှပျခဲ့ကာ ဘိုငျလီကို ခံစဈမှာသုံးပွီး နောကျတနျး ၃ယောကျတနျးနဲ့ ရငျဆိုငျလာခဲ့ပါတယျ။
ဝမျဘဈဆာကာ မရှိခြိနျမှာ ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈကို Wing backနရော ပှဲထုတျလာခဲ့ပွီး ဆိုးလျရှားက ပှဲကပျြကာလမှာ အပွောငျးအလဲ လုပျတယျဆိုတာ သကျသပွေခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပှဲစတာနဲ့ ဦးဆောငျဂိုးရဖို့ အကောငျးအခှငျ့ အရေး ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈ ခပြေးတာကို လူကပျခံထာရခွငျးမရှိတဲ့ ရကျရျှဖို့ဒျ ခေါငျးတိုကျသှငျးခဲ့ရာမှာ တိုငျနဲ့ ထိသှားခဲ့တာဖွဈပွီး ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ စတငျမှုနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ပါတယျ။ ပေါလျစခိုးလျကလညျး ရကျရျှဖို့ဒျဟာ တိုကျစဈမှူးလား တောငျပံကစားသမားလားဆိုတာ မသဲကှဲဘူးလို့ အမွဲပွောခဲ့ကွောငျး ဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။
၃.နောကျထပျ ပေးဂိုးတှနေဲ့ ဒီဂီယာ
ဒီဂီယာတဈယောကျ ဒီနမှေ့ာ အမှားမလုပျခဲ့ပမေဲ့ ယူနိုကျတကျ နံပါတျ၁ဂိုးသမားနရောနဲ့ ထိုကျတနျရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှေ ရှိနဆေဲပါ။ ပထမပိုငျးမှာ နောကျပွနျပေးရာကနေ ဒီဂီယာတဈယောကျ လကျစတာကို ဦးဆောငျဂိုး အစောကွီး ပေးမိတော့မလို ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဗာဒီတဈယောကျ ခကျြခငျြးပဲ လုယူသှားနိုငျပမေဲ့ ဖရကျက လုပျအားနှုနျး ကောငျးကောငျးနဲ့ ဖွတျထုတျသှားနိုငျတာကွောငျ့ ထပျပွီး အရှကျမကှဲခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
၄.အကောငျးနဲ့ အဆိုး ဒှနျတှဲသှားတဲ့ ဖာနနျဒကျဈ
သူရညျရှယျထားမှာ မဟုတျပမေဲ့ ဖာနနျဒကျဈရဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှုက မှတျတမျးတဈခုကို ရရှိစခေဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျမှာ ၁နှဈတောငျ မပွညျ့သေးတဲ့ ကာလမှာတငျ ပျေါတူဂီသားဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ၂၈ပှဲမှာ ၃၁ဂိုးအထိ ပါဝငျပတျသကျထားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဖနျတီးပေးမှုတငျမကဘဲ ကာဗာနီရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ အခြိနျမှနျ နရောမှနျ ရောကျလာပွီး အသငျးအတှကျ ဦးဆောငျဂိုး သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဖာနနျဒကျဈတဈယောကျ ပထမပိုငျးအတှငျးမှာ လူပေးမှားမှုကွောငျ့ ဟာဗေးဘနျးဈရဲ့ ခပြေဂိုးကိုတော့ ခှငျ့ပွုပေးခဲ့ရတာကွောငျ့ ဒီနပှေဲ့မှာ အကောငျး၊ အဆိုး ဒှနျတှဲနတေဲ့ ဖာနနျဒကျဈကို မွငျရတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။
၅. လငျဒီလော့ဖျ ဒဏျရာရခဲ့ခွငျး
လာမယျ့ ဝုဗျနဲ့ ပှဲစဉျမှာ ဆိုးလျရှားတဈယောကျ လငျဒီလော့ဖျ မပါဘဲ ကစားရနိုငျတာကွောငျ့ ဘိုငျလီကို ဒီနပှေဲ့မှာ ပှဲထုတျခဲ့တဲ့အတှကျ ကနြေပျနမေယျ ထငျပါတယျ။ ဆှီဒငျသားဟာ နောကျကြောဒဏျရာ ပွနျပျေါလာပုံရပွီး မိနဈ၆၀ ဝနျးကငျြမှာ ကှငျးထဲကနေ ထှကျသှားခဲ့ရပါတယျ။ လငျဒီလော့ဖျဟာ ယခုအပတျတှအေတှငျး တောကျလြောကျခွစှေမျးပွနပွေီး ယူနိုကျတကျအတှကျ ရလဒျကောငျးတှေ ရယူပေးထားခဲ့ပါတယျ။
၆.ဝဖေနျမှုတှကေို နှုတျဆိတျစခေဲ့တဲ့ ကာဗာနီ
အပွောငျးအရှနေ့ောကျဆုံးရကျမှ ရောကျလာတဲ့ တိုကျစဈမှူး ကာဗာနီအတှကျ ဝဖေနျမှုတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ အခုတော့ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူးကွီးရဲ့ ခွစှေမျးအပျေါ မေးခှနျးထုတျမယျ့သူ သိပျမရှိတော့ပါဘူး။
၃၃နှဈသားဟာ အဲဗာတနျနဲ့ ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့ပွီး ယနပှေဲ့မှာလညျး ဖာနနျဒကျဈရဲ့ ဂိုးကို ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
လက်စတာ ၂ -၂ ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်မှာ ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၆ချက်
ယူနိုက်တက်နဲ့ လက်စတာတို့ဟာ ဘောက်ဆင်ဒေးပွဲစဉ်မှာ ၂ဂိုးစီ သရေသာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁မှတ်စီ ခွဲဝေယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အတွက် ဦးဆောင်ဂိုးကို ရက်ရ်ှဖို့ဒ်က သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး ဟာဗေးဘန်းစ်က လက်စတာအတွက် ပြန်လည် ချေပခဲ့ကာ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်က ဦးဆောင်ဂိုး ထပ်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ ဗာဒီက ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူတွေ ကြားကနေ ချေပဂိုး ပြန်သွင်းကာ အဆင့်၂နေရာမှာ ဆက်လက် ရပ်တည်စေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ပွဲစဉ်မှာ ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၆ချက်ကို ဖော် ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁.ဆိုးလ်ရှားရဲ့ လူစာရင်း အပြောင်းအလဲကို မြင်တွေ့ရခြင်း- ဆိုးလ်ရှားဟာ ယနေ့မှာတော့ လူစာရင်းကို အပြောင်းအလဲ လုပ်လာခဲ့ပြီး ပေါ့ဂ်ဘာနဲ့ ကာဗာနီကို ချန်လှပ်ခဲ့ကာ ဘိုင်လီကို ခံစစ်မှာသုံးပြီး နောက်တန်း ၃ယောက်တန်းနဲ့ ရင်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ ၀မ်ဘစ်ဆာကာ မရှိချိန်မှာ ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ်ကို Wing backနေရာ ပွဲထုတ်လာခဲ့ပြီး ဆိုးလ်ရှားက ပွဲကျပ်ကာလမှာ အပြောင်းအလဲ လုပ်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
၂.ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ရဲ့ လွဲချော်မှု – ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပွဲစတာနဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးရဖို့ အကောင်းအခွင့် အရေး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ချပေးတာကို လူကပ်ခံထာရခြင်းမရှိတဲ့ ရက်ရ်ှဖို့ဒ် ခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့ရာမှာ တိုင်နဲ့ ထိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စတင်မှုနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါလ်စခိုးလ်ကလည်း ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ဟာ တိုက်စစ်မှူးလား တောင်ပံကစားသမားလားဆိုတာ မသဲကွဲဘူးလို့ အမြဲပြောခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
၃.နောက်ထပ် ပေးဂိုးတွေနဲ့ ဒီဂီယာ – ဒီဂီယာတစ်ယောက် ဒီနေ့မှာ အမှားမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ယူနိုက်တက် နံပါတ်၁ဂိုးသမားနေရာနဲ့ ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိနေဆဲပါ။ ပထမပိုင်းမှာ နောက်ပြန်ပေးရာကနေ ဒီဂီယာတစ်ယောက် လက်စတာကို ဦးဆောင်ဂိုး အစောကြီး ပေးမိတော့မလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗာဒီတစ်ယောက် ချက်ချင်းပဲ လုယူသွားနိုင်ပေမဲ့ ဖရက်က လုပ်အားနှုန်း ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖြတ်ထုတ်သွားနိုင်တာကြောင့် ထပ်ပြီး အရှက်မကွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄.အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲသွားတဲ့ ဖာနန်ဒက်စ် – သူရည်ရွယ်ထားမှာ မဟုတ်ပေမဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှုက မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်မှာ ၁နှစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့ ကာလမှာတင် ပေါ်တူဂီသားဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ၂၈ပွဲမှာ ၃၁ဂိုးအထိ ပါဝင်ပတ်သက်ထားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးပေးမှုတင်မကဘဲ ကာဗာနီရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ အချိန်မှန် နေရာမှန် ရောက်လာပြီး အသင်းအတွက် ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်တစ်ယောက် ပထမပိုင်းအတွင်းမှာ လူပေးမှားမှုကြောင့် ဟာဗေးဘန်းစ်ရဲ့ ချေပဂိုးကိုတော့ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတာကြောင့် ဒီနေ့ပွဲမှာ အကောင်း၊ အဆိုး ဒွန်တွဲနေတဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်ကို မြင်ရတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
၅. လင်ဒီလော့ဖ် ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်း – လာမယ့် ၀ုဗ်နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဆိုးလ်ရှားတစ်ယောက် လင်ဒီလော့ဖ် မပါဘဲ ကစားရနိုင်တာကြောင့် ဘိုင်လီကို ဒီနေ့ပွဲမှာ ပွဲထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေနပ်နေမယ် ထင်ပါတယ်။
ဆွီဒင်သားဟာ နောက်ကျောဒဏ်ရာ ပြန်ပေါ်လာပုံရပြီး မိနစ်၆၀ ၀န်းကျင်မှာ ကွင်းထဲကနေ ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ လင်ဒီလော့ဖ်ဟာ ယခုအပတ်တွေအတွင်း တောက်လျောက်ခြေစွမ်းပြနေပြီး ယူနိုက်တက်အတွက် ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူပေးထားခဲ့ပါတယ်။
၆. ဝေဖန်မှုတွေကို နှုတ်ဆိတ်စေခဲ့တဲ့ ကာဗာနီ
အပြောင်းအရွှေ့နောက်ဆုံးရက်မှ ရောက်လာတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီအတွက် ဝေဖန်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ၀ါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီးရဲ့ ခြေစွမ်းအပေါ် မေးခွန်းထုတ်မယ့်သူ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။
၃၃နှစ်သားဟာ အဲဗာတန်နဲ့ ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ယနေ့ပွဲမှာလည်း ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ဂိုးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။